४२ जिल्लामा डेंगु संक्रमण, जनचेतना बढाउन जोड «
४२ जिल्लामा डेंगु संक्रमण, जनचेतना बढाउन जोड
देशभर डेंगुको त्रास बढिरहँदा चिकित्सकहरूले महामारी नभएको तर समयमा उपचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित साक्षात्कारमा चिकित्सकहरूले रोग नियन्त्रणका लागि घरदेखि गल्लीसम्म जनचेतना र सरसफाईको अभियान चलाइएको जानकारी दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख डा. विवेक लालले हालसम्म ४२ भन्दा बढी जिल्लामा यो रोगको संक्रमण देखिएको र साउन १ गतेदखि भदौ १७ गतेसम्म २५५९ जनामा डेंगु रोगबाट संक्रमित भएको तथांक प्रस्तुत गरे । हालसम्म प्रदेश १ मा ७५३ जना, प्रदेश २ मा २३ जना, प्रदेश ३ मा १०९३ जना, प्रदेश ४ मा ५७२ जना, प्रदेश ५ मा १०५ जना, प्रदेश ६ मा २ जना र प्रदेश ७ मा १२ जना संक्रमित रहेको उनले बताए । यो रोगबाट कास्की, मकवानपुर, सुनसरी, चितवनमा बढी संक्रमण देखिएको छ
डेंगुबाट चार जनाको मृत्यु भइसकेको जानकारी दिँदै उनले भने, “उच्च पहाडी क्षेत्रमा समेत यसको संक्रमण देखिन थालेकोले सचेत हुनुपर्छ ।” अहिलेसम्म १३० वटा मुलुकमा यो रोगको संक्रमण देखिएको जानकारी गराए । उनले रोग नियन्त्रणका लागि जनचेतनाका कार्यक्रम संचालन गर्नुका साथै गैरसरकारी संस्था, स्थानीय निकायको अगुवाईमा नेपालभर डेंगु संक्रमणका लक्षण र बच्ने उपायका बारेमा घरघरमा जनचेतना फैलाउने काम भइरहेको जानकारी दिए ।
लालले भने, “देशभरका स्थानीय तहमा न्यूनतम ८७ लाख र अधिकतम ८९ लाख बजेट छुट्याएको र हालसम्म ८५ वटा स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।” यो रोगबाट गत वर्ष ३ जनाको मृत्यु भएको पनि उनले जानकारी गराएका थिए ।
लामखुट्टेले १०० जनालाई टोकेमा १० जनालाई डेंगु संक्रमण हुने र संक्रमण भएकाहरूमा ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, मांसपेशी दुख्ने, आँखाको गेडी दुख्ने जानकारी उनले गराए । बढी संक्रमण भएकाहरूमा रक्तश्राव हुने, हड्डी भाँचिए जस्तो दुखाई हुने, बान्ता हुने, खान मन नलाग्ने, शरीर शिथिल हुँदै जानेजस्ता लक्षण देखिन्छन् ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले हरेक दुई–दुई वर्षको अन्तरालमा डेंगु संक्रमणको रिसर्च हुने गरेको र हरेक तीन वर्षमा यो रोगको प्रकोप देखिने गरेको बताए । उनले भने, “डेंगु संक्रमण ६ देखि ७ हजार फिटसम्मको उचाइसम्म पुगिसकेको छ । तर, अहिलेको डेंगु संक्रमण गम्भीर खालको छ ।”
बिरामीहरूको चाप बढेसँगै अस्पतालको बेड अपुग भएको कारण बेड थप्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग प्रस्ताव राखेको र हाल २५ हजार बिरामीको उपचार भइरहेको उनले बताए ।
किटमा चर्को मूल्य लिनेलाई कारबाही
जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले डेंगु किटको चर्को मूल्य लिनेलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको कारोबार संवाददाता विप्लव काफ्लेले जनाएका छन् । बिहीबार बसेको सरोकारवाला बैठकले लागत मूल्यमा बढीमा १० प्रतिशत रकम थप लिन सकिने निर्णय गरेको छ । डेंगु किटको साधरणतया ३ सय देखि ४ सय रुपैयाँ पर्ने गर्छ ।
“डेंगु परीक्षणमा चर्को मूल्य तिर्नुपरेको गुनासा आएका छन्,” प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले भने, “महामारीको अवस्थामा फाइदा लिन मनलागि शुल्क लिन पाइँदैन, खरिद मूल्यभन्दा १० प्रतिशत बढी लिएको भेटिए कारबाही हुन्छ ।” उनले शुल्कबारे छिट्टै अनुगमन गरिने बताए । डेंगु परीक्षण गर्दा बिरामीले १ हजारदेखि २ हजार ५ सयसम्म मूल्य तिर्नुपरेको पाइएको छ । सरकारी अस्पतालमा डेंगु परीक्षण निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । उनले सेवाग्राहीले चर्को मूल्य तिरेको सूचना दिन आग्रह गरे । कम्पनी र गुणस्तरअनुसार परीक्षण किटको मूल्य फरक पनु स्वभाविक भए पनि धेरै मुनाफा जोडेर शुल्क लिने काम रोकिने उनले बताए ।
निजी अस्पतालको सहयोगमा स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले समन्वय गरेर हरेक स्थानीय तहमा कम्तिमा एउटा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर गर्ने निर्णय गरेको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख दीपक तिवारीले डेंगु परीक्षण शुल्कमा एकरुपता ल्याइने बताए । उनका अनुसार चितवनमा भदौ १८ गतेसम्म १ हजार ९ सय ८ जनाको डेंगु परीक्षण भएको थियो । जसमध्ये ६ सय २३ जनामा संक्रमण देखिएको छ । जसमध्ये चितवनकै ४ सय ५५ जना छन् ।
डेंगु परीक्षण धेरै फेला परेका अस्पतालमा भरतपुर अस्पताल र नारायणी सामुदायिक अस्पताल छन् । भरतपुर अस्पतालमा हाल १ सय ५० किट मौज्दात छ ।
संखुवासभामा भाइरल ज्वरोका बिरामी बढे
पछिल्लो समय संखुवासभामा भाइरल ज्वरोको प्रकोप फैलिएको कृष्णराज शाक्यले जनाएका छन् । भाइरल ज्वरोका बिरामी बढेसँगै अस्पताल धाउनेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।
जिल्ला अस्पतालमा आउने बिरामीमध्ये अधिकांश भाइरल ज्वरोको बिरामी रहेको अस्पतालको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । भदौ महिनाको मात्र तथ्यांक हेर्दा परीक्षण गरिएका १ हजार सात सय ६४ बिरामीमध्ये ९ सय ६१ जना भाइरल ज्वरोको बिरामी रहेका छन् ।
ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने जस्ता समस्या धेरैमा देखिएको उपचारमा संलग्न डा. ज्वाला थापाले बताए । यो समस्या विद्यार्थी उमेर समूहका बालबालिकाहरुमा बढी देखिएको जिल्ला अस्पताल खाँदबारीका डा. लक्ष्मण खड्काले जानकारी दिए । विद्यालयमा धेरै बालबालिकाहरुको सम्पर्क हुने र एकबाट अर्कोमा तुरुन्त सरिहाल्ने भएकोले बालबालिकाहरु बढी ग्रसित भएको डा. खड्काले बताए ।
यो समयमा सिजनल हावापानीको कारण भाइरल ज्वरोको समस्या आउने गरेकाले थप सचेतना अपनाउन आवश्यक रहेको भन्दै दूषित पानी र धुँवाधुलोबाट बच्न र थप सरसफाइ अपनाउन चिकित्सकहरुको सुझाव छ ।
लामखुट्टेको टोकाईबाट सर्ने डेंगु रोगको संक्रमण देखिएसँगै लमजुङका सरोकारवालाहरुले चासो बढाएको सन्देश पौडेलले जनाएका छन् । जिल्लाका तीनजनामा डेंगु रोगको संक्रमण देखिएपछि रोकथामको निम्ति स्वास्थ्य सरोकारवालाहरु सक्रिय बनेका हुन् ।
गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले सदरमुकाम बेसीशहरमा सरोकारवालाहरुबीच डेंगु रोगबारे अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको छ । रोगको बारेमा जिल्लाका स्वास्थ्य निकायहरुलाई परिचालन गरी समुदायस्तरमा प्रभावकारी सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न जिल्लास्तरीय अभिमुखीकरण गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत मनुराज वरालले बताए ।
स्वास्थ्य निर्देशनालयको आयोजना तथा स्वास्थ्य कार्यालय लमजुङको समन्वयमा जिल्लाका सरकारी कार्यालयका प्रमुख एवं सञ्चारकर्मीहरुलाई रोगको बारेमा जानकारी गराएको हो । लमजुङमा डेंगु रोगसम्बन्धी परीक्षण प्रयोगशाला नभएकोले अन्यत्र परीक्षणको क्रममा यो रोगको संक्रमण भेटिएको स्वास्थ्य कार्यालय लमजुङका प्रमुख केशव प्रसाद चापागाईले बताए ।
तेह्रथुममा पनि डेंगुका बिरामी
पूर्वी तराईका जिल्लामा नियन्त्रणमा आउन नसकिरहेका बेला तेह्रथुममा पहिलो पटक डेंगु रोगका बिरामी भेटिएको प्रकाश पाक्साँवाले जनाएका छन् । हालै जिल्ला अस्पताल तेह्रथुममा उपचारका लागि आएका बिरामीहरुमध्ये अहिलेसम्म चार जनामा डेंगुको संक्रमण भएको भेटिएको हो ।
पछिल्लो समय यातायातले तराई र पहाड जोडिएसँगै तराईमा रोग सार्ने लामखुट्टे र भुसुनाजन्य रोग विस्तारै पहाडमा पनि फैलिँदै गएकोले जिल्लामा डेंगु देखिएको हुन सक्ने जिल्ला अस्पतालका डा. आनन्द कुमार देवले बताए ।
जिल्ला अस्पतालका चिकित्सकका अनुसार जिल्ला अस्पतालमा उपचारका लागि आएका चारजना बिरामीको उपचारका क्रममा रगत परीक्षण गर्दा उनीहरुमा यो रोग देखा परेको हो । अहिले बिरामी चारैजनाको जिल्ला अस्पतालमै उपचार भइरहेको छ । बिरामीकोे अवस्था सामान्य भन्न नमिल्ले अस्पतालले जनाएको छ ।
भदौ दुईदेखि चार गतेसम्म उपचारका लागि अस्पताल पुगेका दुई महिला र दुई पुरुषको रगत परीक्षणका क्रममा डेंगु देखापरेको थियोे । चारमध्ये दुईजना बिरामीले केही हप्ताअघि सुनसरीको धरान पुगेर आएको बताएका छन् ।
४२ जिल्लामा डेंगु संक्रमण